Ilay rajako tsy tia akondro
Rajako kely iray zay tsy tia akondro hono izy. Mafy, mafy ho an'ny ragidro izany hoe tsy tia akondro izany.
Nataon'I reniny avy io karaza-nahandro io : akondro atono, andrahoana, asiana siramamy, atao gilasy amin'akondro… Tsy nisy tsy natao, manda ny tsy hihinana ilay rajako kely.
Ketraka ny reniny, tapa-kevitra izy fa handeha hijery ny mpanao sikidin'ny rajako, tsy iza izany fa ilay lahiantitra Orang-Outang izay mipetraka any amin'ny fara-atiala be any.
Dia nasain'ilay antidahy mpisikidy hoentina any aminy ilay rajako kely rehefa diavolana. Nandritry ny alina, nodimbiasin'I Ouistiti ilay mbola mpianatra ilay antidahy mpisikidy, ampiasainy daholo ny fahaizany : dihy, hira, hoso-doko; fangaro. Niaraka tamin'ireo mpanjakan'ny ragidro izy sy ireo maro hafa koa. Vao mangirandratsy, lanaka, nampanantsoiny ny ray amandrain'ilay rajako kely ary hoy izy :
“Rahampitso ento ery amin'iry vato be iry eo ampovoan-dreniranon'I Ouatabanana ny zanakareo. Mila mijanona eny telo andro sy telo alina irery izysady tsy misotro no tsy mihinana. Rehefa afak'izay, dia ho sitrana ny zanakareo.
Dia notanetrahin'ny ray amandrenin'ilay gidro kely ny tenin'ilay pmisikidy.
Nijanona telo andro sy telo alina irery teo ambony vato teo amin'ilay reniranon'i Ouatabanana.
Ny marainan'ny andro faha-efatra, tongan y ray amandreniny haka an'ilay gidro kely. Feno ny hafalian'izy ireo, dia niantsampy teny amin-dreniny ilay rajako kely, ary nony nasehondreniny azy ilay akondro dia nambosimbosika haramin'ny farany ilay gidro kely.